Wasiir Cawil oo Shaaca ka Qaaday in Bisha June ee Sannadkan Burco Laga Beddeli Doono Lacagta Giimbaarta | WWW.SOMALILAND.NO
Wasiir Cawil oo Shaaca ka Qaaday in Bisha June ee Sannadkan Burco Laga Beddeli Doono Lacagta Giimbaarta
Posted on Maajo 25, 2008 by weriye1
“Golaha Wakiillada iyo guddi kastaba waa waajib dastuuriya in aan horimaado oo u warramo, dastuurkaana jideeyey.” Wasiirka Maaliyadda
Hargeysa (sl.no) 26 may 2008 – Guddiga Dhaqaalaha ee Wakiillada iyo masuuliyiinta sare ee Wasaaradda Maaliyadda ayaa fadhi albaabadu u xidhan yihiin shalay ku yeeshay xarunta Aqalka Wakiillada ee Hargeysa, kaas oo ka dhashay is-faham Madaxweyne Rayaale iyo xubnaha Shirguddoonka Wakiilladu ku gaadheen kulamo xidhiidh ahaa oo ay maalmihii la soo dhaafay kaga arrinsanayeen xal-u-helidda khilaafyada sharci ee u dhexeeyey labada dhinac.
Kulanka shalay dhexmaray xubnaha Guddiga Dhaqaalaha Wakiillada iyo masuuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda, isla markaana ku wehelinayeen Wasiirka Duulista Md. Cali Maxamed Warancadde, Maareeyaha Dekedda Berbera Eng. Cali Cumar Maxamed (Xoor-xoor) iyo saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda oo qaatay muddo dhawr saacadood ah, ayaa markii uu dhammaaday waxa warbaahinta si wadajir ah warbixin kooban uga siiyey waxyaabihii labada dhinac kaga arrinsandeen fadhigooda Wasiirka Maaliyadda Md. Xuseen Cali Ducaale (Cawil) iyo Guddoomiyaha Guddiga Dhaqaalaha Md. Maxamed Maxamuud Cumar/xaashi, waxaanay xuseen in ay isla soo qaadeen qodobo ku saabsan miisaaniyad-sannadeedka dawladda ee 2008, isla markaana su’aalo badan iska weydiiyeen waxyaabaha lagu muransan yahay sida xisaab-xidhaddii miisaaniyadihii hore ee dawladda oo aan ilaa hadda Wakiillada la horkeenin.
Ugu horreyn Wasiir Cawil oo hadal kooban shirkaa jaraa’id ka jeediyey ayaa isagoo ka warrmayey waxyaabihii labada dhinac kaga wada hadleen kulankooda waxa uu yidhi; “Guddoomiyaha iyo guddiga dhaqaaluhu runtii si fiican bay noo soo dhaweeyeen, aad baanuna u doodnay, su’aalo badan waannu uga jawaabnay guddiga ilaa caawana [xalay] way noo soconaysaa, halkana waxaannu u fadhinaa waa dantii ummadda iyo dantii qaranka, waxaan filaynaa in aannu ilaa caawa [xalay] dhammaysan doono, si fiican bayna ku dhammanaysaa su’aalaha wixii dhimana waannu dhammayn doonaa, waanna waajib saran guddiga dhaqaalaha inay miisaaniyadda u kuurgalaan oo Golaha Wakiillada u qoraan warbixin tifaftiran oo markaa ay go’aankeeda qaataan.”
Sidoo kale Guddoomiyaha Guddiga Dhaqaalaha Golaha Wakiillada Md. Maxamed Maxamuud Cumar/xaasho oo isna faahfaahin ka bixinayey arrimaha ay isla soo qaadeen masuuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda waxa uu yidhi; “Annagu waxna waannu isweydiinay, waxana suurtogal ah in maanta [shalay] ay noqoto maalin shaqo oo ilaa caawa [xalay] aannu wada shaqayno, su’aalihii inta badan waannu dhammaysanay, waxna way noo hadheen, wada shaqyantayadiina Insha Allaahu waxaannu rajaynaynaa in labadayada qoloba dib isku saxno wixii jira oo si ummadda loogu shaqeeyo sida distoorku sheegayana la raaco ayaanu isla qaadanay.”
Hadalladaa kooban ee ay wada jirka u jeediyeen Wasiirka Maaliyadda iyo Guddoomiyah Guddiga Dhaqaalaha, kadib su’aalihii ay suxufiyiintu waydiiyeen iyo jawaabihii ay bixiyeen waxay u dhaceen sidan:
Su’aal: Wasiir, waxa jiray marar badan oo ay guddiga dhaqaaluhu kuu yeedheen oo aad u iman wayday, maxay ahayd sababta aad guddiga uga wareegaysannaysay?
Jawaab: Yaa kugu yidhi wuu ka wareegaysanayey?
S: Waxa wasiir jirtay in Shirguddoonka Wakiillada iyo Madaxweynuhu ka wadahadleen arrintan aad dafirayso oo duduuc lagugu keenay halkan, taan maad beenaynaysaa?
J: Waxa weeyaan horta cidda la khasbayaa ma jirto, oo Khamiistii wasaaraddu way u timi guddiga, waanna la is waayey, Sabtidiina waannu u nimi, maanta [shalay] ayaanu nasiib isu helnay hawshiina si fiican bay noogu socotaa.
S: Sannadkii hore ee 2007 la islama oggolaan miisaaniyaddii oo muran baa ka dhashay, markaa maxay ahayd miisaaniyadda uu sannadkii hore waddanku ku dhaqmay?
J: Taa waannu ka heshiinay guddiga.
S: Laakiin, ummaddu waxay doonaysaa inay ogaato ee maxay ahayd?
J: Miisaaniyadda sannadkii hore dalku ku dhaqmay waxay ahayd tii 2007.
S: Markaa way idiin la oggolaadeen guddiga dhaqaaluhu?
J: Iyaga [Guddiga Dhaqaalaha] waydii aniga ha iwaydiine.
S: Guddoomiye, hore waxaad ugu dhawaaqdeen in aanay bulshadu bixin karin cashuur aanay xukuumadu horkeenin Wakiillada, arrintaa ma ka wada hadasheen wasiirka?
J: Waxa weeyaan horta cashuurtaas way dambaysaa oo waa wax aannu Golaha horgayn doono, wixii aan sharciyeysnayn, taasina dhibaataa ka timidoo waa ta loo beddelay guddigu waxay yidhaahdeen in aan cashuurba la bixin, annagu maanaan odhan cashuur yaan la bixin, laakiin waxaannu nidhi cashuur aan Baarlamaanku jiday yaan la qaadin, iminkana waan ku celinayaa oo waa wax distooriya oo taal.
S: Wasiir dastuurku waxa uu dhigayaa in aan Golaha Wakiillada uga warranto arrinta miisaaniyadda oo ay su’aalo kaa weydiiyaan, markaa waa maxay sababta aad Golaha u hortegi weyday ee guddiga aad ugu timi?
J: Golaha Wakiilada waanigii hortagay, miisaaniaydda waanigii geeyey, waanigii u warramay, iminkana haddii ay u baahan yihiin guddi dhaqaale, Golaha Wakiillada iyo guddi kastaba waa waajib dastuuriya in aan horimaado oo u warramo, dastuurkaana jideeyey.
S: Wasiir sida distoorka qodobkiisa 55aad dhigayo Wakiilladu xagbay u leeyihiin inay miisaaniyadda wax-ka-beddel ku sameeyaan, arrintaa markii ay sannadkii hore sameeyeena buuq badan baa ka dhashay oo miisaaniyaddii 2007 sidaasaa lagu laalay, markaa miisaaniyaddan 2008 ee hadda Golaha hortaal haddii ay wax-ka-beddel ku sameeyaan Malaga yaabaa in xukuumaddu diido, oo sidii tii hore buuq ka dhasho?
J: Sannadkan miisaaniyadda buuq ka dhici maayo, waayo doorashooyinkii madaxtooyada iyo tii dawlahada hoose ayaa soo socda, wax buuqa oo dhacayaana ma jiraan, Guddoomiyuhuna taas waa u diyaar in aan buuq dhicin.
S: Wasiir, lagactii hore ee miisaaniyadda ugu jirtay beddelka giimbaarta Burco xaggay ku dambaysay, goormaadse lacataa ka beddelaysaan Burco?
J: Lacagta Burco waxaannu beddelaynaa bisha lixaad ee sannadkan ummadda reer Burcona waannu ka xorreynaa lacagta giimbaarta ah, lacagtii daabacaadiina way noo imanaysaa oo shirkaddii waannu ka heshiinay, waxaannu ku rajo weynahay bisha dambe inay timaado oo lacagtaa ka xorreyno Burco, walibana lacagtaa Burco waa la gubayaa.
S: Wasiir, iminka Guddoomiyaha Guddiga Dhaqaaluhu waxa uu sheegay inaan la qaadi Karin cashuur aan Golaha Wakiilladu oggolaan, ma ku waafaqsan tahay adigu?
J: Haa, waan ku waafaqsanahay 100% cashuur aan sharciyeysnay oo aannu Golaha Wakiilladu oggolaan lama qaadi karo, annaguna wasaarad ahaan ma qaadno, haddii la helo cashuur aan Golaha Wakiilladu oggolaan oo la qaado waa dambi.
S: Wasiir, waxaad tidhi miisaaniyadda sannadkan buuq ka dhici maayo, markaa miyaan la odhan Karin wasaaradiina iyo guddigu waad isla qaadateen in miisaaniyadda siday hadda tahay lagu ansixiyo, shirarkan albaabadu u xidhan yihiina waa qaar ummaddu uun la tusayo?
J: Waxa weeye sharaf bay noo tahay guddiga dhaqaalaha iyo wasaaradda maaliyaddu inay is afgartaan, waanan rajaynayaa waxaanan filayaa sidaa aan ka dhawaajinay inay miisaaniyaddu ku dhammaato iyada oo aan wax buuq ahi dhicin.
S: Wasiir; waxa in badan la idinku eedeeyaa in xukuumaddu lacago badan soo daabacato oo aan Wakiillada la horkeenin, markaa miyey jirtaa lacag xukuumaddu soo daabacatay oo aan Golaha la horkeenin?
J: Annagu haddaannu xukuumadda nahay lacag ma soo daabacano ee baanka ayaa soo daabacda, su’aashaasna baanka soo weydii.
« Hanbalyo iyo bogaadin ku socota gobalnimada gobalka gabilayoo ka timid ururka horumarinta iyo waxbar‏ ee Alaybaday. Daawo xafladii 18-May 2008 ee Oslo Norway »